The HTC U12 Plus ga-abịa na Qualcomm Snapdragon 845 na 8GB nke RAM dịka ọhụụ ọhụrụ | Gam akporosis
The HTC U12 Plus ga-abịa na Qualcomm Snapdragon 845 na 8GB nke RAM dịka ọhụụ ọhụrụ
HTC yiri ka nwere HTC U12 Plus, flagship na-esote nke ụlọ ọrụ ahụ nke ga-abịa n'aka na nhazi ọhụrụ site na ụlọ ọrụ Qualcomm siri ike, na ọtụtụ nkọwapụta teknụzụ na atụmatụ ndị ga-etinye ya dịka otu n'ime njedebe kachasị mma n'afọ a.
Dị ka ọhụụ kachasị ọhụrụ nke ngwaọrụ a si dị, ga-abịa kacha mma Taiwanese, nke ọ bụ ọrụ maka ịkwalite ihe ịga nke ọma nke akara ahụ nwere n'oge ya kachasị mma, ebe o doro anya na ọ kpataghị ọgba aghara ma ọ bụ iwe na ahịa dị ka ndị na-emepụta ekwentị ndị ọzọ nọ na-eme, dị ka, dịka ọmụmaatụ, Huawei, Xiaomi, na ndị ọzọ. Anyị na-enye gị nkọwa!
Dabere na data kachasị ọhụụ ekpughere, nke gosikwara ọtụtụ n'ime ndị ahụ asịrị, ma na-emegide ụfọdụ ndị ọzọ, HTC U12 Plus ga-abịa na octa-isi Qualcomm Snapdragon 845 SoC (4x 75GHz Cortex-A2.8 + 4GHz 55x Cortex-A1.8) nke 7nm na 64bit ije. nke a ga - esonyere ya na 8GB RAM na 128GB nke oghere dị n’ime nwere ike ịgbasa site na microSD ruo ikike 2TB. Nakwa ọ ga-enweta ya na ihuenyo 5.5 nke anụ ọhịa na mkpebi QuadHD + n'okpuru usoro nchịkọta 18: 9 ma chebe ya na ọkọ, bumps na tụlee site na iko Corning Gorilla Glass 5.
Leaked nkọwapụta nke HTC U12 Plus
Na mpaghara foto, Ekwentị mkpanaka a ga - enwe igwefoto nwere okpukpu abụọ nke mkpebi 12 + 16MP na oghere oghere f / 1.5, UltraSpeed ​​autofocus, HTC UltraPixel technology, na ikanam Flash. Na n'ihu, anyị ga-ahụ 8MP abụọ shooter na HDR Boost maka selfies, oku vidiyo na ọdịdị ihu.
N'aka nke ọzọ, ga-abata na Android Oreo dị ka sistemụ arụmọrụ, na HTC Sense 2.0, batrị 3.450mAh na Ndenye Ntanye 4.0 + ngwa ngwa na nkwado nkwụnye ụgwọ ikuku, onye na-agụ akara mkpịsị aka, nkwado dualSIM, IP68 kwadoro nke mere ka ọ tozuo megide mmiri, ájá na ọnọdụ ndị ọzọ siri ike, Wi-Fi Fi 802.11 a / b / g / n / ac, NFC teknụzụ, na Dolby Audio-nyeere BoomSound ụda na ndị ọkà okwu.
N'ikpeazụ, ọ dịghị ihe a maara banyere ya, anyị nwere ike ichere maka nrịba ndị a niile ka ụlọ ọrụ Taiwanese kwadoro. A ga-ahapụ HTC U12 Plus n'etiti afọ a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » HTC » The HTC U12 Plus ga-abịa na Qualcomm Snapdragon 845 na 8GB nke RAM dịka ọhụụ ọhụrụ
Ọhụrụ ọhụụ na-akwado atụmatụ nke Moto G6 Plus